Hamiga Riyaale iyo higsiga Saleebaan
Waxay ahayd maalin aan fogayn maalintii ururka xukumada gacanta ku haya ee uu gudoomiyaha u yahay madaxwayanha J/S/L mudane Daahir Riyaale Kaahin ay talo ku murugtay markii si lama filaan aha uu ugu soo baxay ururkii uu hormoodka u ahaa MUJ Axmed Maxamed Siilaanyo,
Taas oo ay doorashadii madaxwaynaha ay ku kala badiyeen waxaan la sheegi karin.
Kadib markii gudida commissionku ay bilabeen cod tirintii ugu dambaysay ayaa ururkii dawlada hayey ay liq liqdeen si uu arrin ahaaba iyadoo ay u bahdeeen nin ka difaaca ninkan sida dhibta yar ugu soo baxay madaxwayninimada dalka.
In kastoo ay ku noqotay dawlada “laf hunguri gashay” soo bixitaa silaanyo oo ay si ay iskaga reebaan ay waayeen ayaa maalintii gudida doorashadu ay ku dhawaaqaysay natiijadii dorashada ayaa meeshaa ka dhacay qalalaase aad u badan , waxay miciin bideen xisbiga xukuumadu in ay qaylo dhaan u dirtan saleebaan gaal iyo xubno kale oo joogay dalka
Isla daqiiqadii uu soo galay isaga iyo xubno kale oo daacad u ahaa ururka dawlada waxa ay abaareen xaruntii commisionka taas oo ay xamasad iyo buqu cirka isku shareray,
Isla daqiiqadihiba arintii cakirnayd ayaa cirka isku sii shareertay taas oo walac ku keentay xisbigii kulmiye, noqotayna in ay gudidii commisionku ay ku dhawaaqan natiijadii codbixinta oo lagu kala baxsaday fara cidiyahood kuna guulaysteen ururka dawlada ee UDUB.
Markii ay ku guulaysten ayaa waxaa dhacday in uu hungureeyey saleeban jagada gudomiyanimada xisbiga madaama uu hantay Riyaale madawayninimadii in isna uu ku fadhiisto kursigaas, tasi waxay ku noqotay Riyaale waxa u qudhqudhsami wayday, badalkediina uu Riyaale yidhi wasiirnimo ayaa iga abaal gud ah.
Isla markaa ayuu saleebana ku gacan saydhay uguna abmababaxya cariga UK.
Hadaba maxay daarran tahay ololaynta Riyaale ee saleeban gaal???.
Markii ay bananantay jagada gudoomiyaha gurtida ayuu u ololeeyey saleebaan, si u uga hortago hujuumkii wayna ee uu ku hayey oo saleeban wasiirnimona uu ku qanci waayey iyo in uu “lafo gari iyagaa la iskujabiyaye” kaga hortago Hogaanka xisbiga Kulmiye muj Siilaabanyo.
ku guulaysay Saleebaan jagadaa gudoomiyaha guurtida se Riyaale ma ka fikiray in uu kaga amaan helaayo kursigiisa madaxwayninimo????
Jawabtu waa maya
(Malaha Riyaale iyo milicsiga saleebaan waa way kala fogyihiin)!!!!!!!!